Izindaba - Ukusebenza kweLoader amathiphu ayisithupha okwenza ube umqhubi omuhle wokulayisha
Ukusebenza kweLoader amathiphu ayisithupha okwenza ube ngumqhubi omuhle wokulayisha
Umqhubi ophethe kahle angakwazi ngokucacile ukuthi angawusebenzisa kanjani kakhulu umshini lapho eshayela umlayishi, anciphise ukugqoka komshini, anciphise ukusetshenziswa kukaphethiloli, futhi aqedele umsebenzi kahle futhi ngokushesha.
Izindlela eziyisithupha zokwenza ube ngumqhubi omuhle wokulayisha
Izeluleko ezilandelayo eziyisithupha zizokukwenza ube ngumqhubi omuhle wokulayisha! Woza uzobheka.
Lapho umlayishi esebenza, isithende siseduze kwephansi lekhumbi, ipuleti lonyawo kanye ne-pedac ye-accelerator kugcinwa kufana, futhi ipedali yegesi icindezelwa kahle phansi.
Lapho i-Loader isebenza, i-mpintsha kufanele ihlale iqinile. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zokusebenza, ukuvulwa kwe-mpintsha kufanele kube cishe ngama-70 ~ 80%.
Lapho okulayishwayo kusebenza, ipuleti lonyawo kufanele lihlukaniswe nesinyathelo sokubhidliza bese libekwa phansi phansi kukalishi. Kungcono ukuthi unganyatheli unyathela lwamabhuleki.
Ama-Loader avame ukusebenza ezindaweni ezingalingani zokwakha. Uma unyawo luhlala njalo kunyathela lamabhuleki, ukunyakaza komzimba phezulu naphansi kuzokwenza ukuthi umshayeli anyathele ibhuleki ngokunganaki.
Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, kuyadingeka ukulawula isimo senjini nokushintsha amagiya ngokulawula ukwehla kwe-throttle.
Lokhu akugcini nje ngokugwema ukushisa kohlelo lwe-braking olubangelwa ukubopha amabhuleki kaningi, kepha futhi kuletha lula ekwandeni kwejubane elisheshayo komlayishi.
Lapho okulayishwayo kusebenza, ikakhulukazi lapho kufakwa ifosholo, ifosholo kufanele ligcotshwe ngamafosholo ligcwele izinto ngokudonsa izigaxa zokulawula nokuphakamisa nokujikajika ngaphansi kwesimo sokumpintsha okuzinzile.
Ukudonsa okujikelezayo kwesiphakamisi sokulawula nokuphakamisa amabhakede kubizwa ngokuthi "ukukhuthala".
Le nqubo ibaluleke kakhulu futhi inomthelela omkhulu ekusetshenzisweni kukaphethiloli.
Ukudidiyela ukubambisana okuphilayo phakathi kokuphakamisa nesilinda yokulawula amabhakede. Inqubo ejwayelekile yokwakhiwa kwefosholo kulayishi ukubeka kuqala ibhakede phansi bese ushayela kahle uye enqwabeni.
Lapho ibhakede lihlangabezana nokuphikiswa lapho kufosholozwa kufana nenqwaba yempahla, kufanele kulandelwe umthetho wokuphakamisa ingalo kuqala bese kuhoxiswa ibhakede.
Lokhu kungakugwema ngempumelelo ukumelana ngaphansi kwebhakede, ukuze unikeze ukudlala okugcwele emandleni amakhulu okuphuma.
6, akuvunyelwe nakancane
Owokuqala wenqatshelwe ngokuqinile ukuqhuma impintsha. Akunandaba noma ngabe umlayishi uyahamba noma uyishaya ngamafosholo, unganyatheli i-accelerator pedal ngamandla, futhi ngaso sonke isikhathi gcina i-accelerator control ilula, izinzile futhi imnene. Nciphisa ngokwanele futhi unciphise ukwehluleka okwenziwe ngumuntu ekusebenzeni.
Okwesibili, ukushibilika emasondweni akuvunyelwe nakancane. Lapho i-Loader isebenza, amathayi azoshibilika lapho i-accelerator iphoqeleka ukuthi ihlangane nokuphikiswa. Le nto ivame ukubangelwa ukungasebenzi kahle komshayeli, okwandisa ukusetshenziswa kukaphethiloli futhi kulimaze amathayi.
Okwesithathu ukuvimbela ngokuqinile isondo langemuva ekutshekeni. Ngenxa yamandla amakhulu okumba komlayishi, umshayeli uvame ukufaka amafosholo omhlabathi oqinile wangempela kanye namagquma amatshe neminye imisebenzi. Uma lo msebenzi ungalungile, amasondo amabili angemuva athambekele ekuphakameni asuke phansi. Ukwehla kokwehla kwalesi senzo sokutshekisa kuzodala ukuthi kuphuke intambo yebhakede nebhakede likhubazeke; lapho isondo langemuva litshekele phezulu, kuzokwenza kalula ukuthi ukushisela kozimele bangaphambili nabangemuva nezinye izakhiwo kuqhekeke, ngisho nepuleti lizophuka.
Okwesine ukuvimbela ngokuqinile ukushaya inqwaba. Ngokufaka izinto ezijwayelekile zefosholo, umlayishi angasebenzisa igiya lesibili (u-gearbox onamagiya ayisikhombisa, u-gearbox onamagiya amathathu angavunyelwe ukusebenzisa igiya lesibili). Akuvunyelwe nakancane ukwenza umthelela wokungena ngaphakathi kwenqwaba enamagiya ngaphezulu kwegiya lesibili. Indlela eyiyo kufanele kube ukushintshela egiyeni I ngesikhathi ukuqedela inqubo yokufosholoza lapho ibhakede lisondela enqwabeni yempahla.
Ukuqamba kushintsha igama, ikhwalithi idala ikusasa! Shan Yi imishini LTD, elise Laizhou, esifundazweni Shandong, yasungulwa ngo-1990 S. Le nkampani ihlanganisa indawo 4000 sqm futhi has a imodemu ukukhiqizwa workshop 20000 sqm nge utshalomali ingqikithi yuan 200000000, kuba ibhizinisi onguchwepheshe ukukhiqizwa kwamaloli kanye namaloli okuzixuba okuzenzela Ikhiqiza amaloli angama-50000 kanye namaloli angama-8000 wokuzondla
Ama-Wheel Loader, I-Compact Wheel Loader, Izimayini Zesivinini Samasondo, Isixhumi Sokukhonkolo Esizimele, Amasondo Loader For Rent, Ama-Bell Wheel Loader,